ရှာရာပိုဗာခတျေလှနျမှာ ပုရိသတှရေဲ့အသညျးနှလုံးကို သိမျးပိုကျမယျ့ US အိုးပငျးခနျြပီယံ ဗွိတိနျဆယျကြျောသကျလှပြိုဖွူလေး |
တဈခြိနျတုနျးက ရုရှားနိုငျငံရဲ့ တငျးနဈအကြျောအမျောတှဖွေဈတဲ့ ကျောနီကိုဗာ၊ မာရီယာရှာရာပိုဗာတို့ဟာ တငျးနဈကှငျးထဲမှာသာမကဘဲ သူတို့ရဲ့အလှအပတှနေဲ့ ပုရိသတှရေဲ့ အသညျးနှလုံးကို သိမျးပိုကျခဲ့ဖူးတယျ။
ကျောနီကိုဗာဆိုရငျ ဂရငျးစလငျးတဈဦးခငျြးပွိုငျပှဲတှမှော ဘာမှမယျမယျရရ အောငျမွငျမှုမရခဲ့တာတောငျ သူမရဲ့ခဈြစရာကောငျးတဲ့မကျြနှာလေးနဲ့ ပရိသတျတှကေ ကျောနီကိုဗာမှ ကျောနီကိုဗာဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တယျ။
ကျောနီကိုဗာနောကျပိုငျး ပုရိသတှရေဲ့အာရုံက ရုရှားတငျးနငျလှပြိုဖွူလေး မာရီယာရှာရာပိုဗာဆီ ကရြောကျလာတော့တာပဲ။
ရှာရာပိုဗာရဲ့ ကှငျးတှငျးအောငျမွငျမှုက ကျောနီကိုဗာထကျ အမြားကွီးသာခဲ့ပွီး သွစတွေးလအြိုးပငျး၊ ပွငျသဈအိုးပငျး(၂၀၁၂၊ ၂၀၁၄)၊ ဝငျဘယျလျဒနျ၊ US အိုးပငျးတှမှော ခနျြပီယံဖွဈခဲ့သလို ကှငျးပွငျပမှာလညျး ရှာရာပိုဗာကို ‘ကွှေ’တဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့တယျ။
ဒါပမေဲ့ မနှဈက၊ ဖဖေျောဝါရီမှာ တငျးနဈလောက,ကနေ ရှာရာပိုဗာအနားယူသှားတဲ့နောကျ ပုရိသတှေ ဝနျးရံရမယျ့ အခြောအလှလေးတှေ သိပျမရှိတော့ဘဲ အသကျကွီးနပွေီဖွဈတဲ့ ဆရီနာဝီလြံဈက နဂိုကတညျးက ယောကျြားတဈယောကျလို ဒေါငျးတညျမောငျးတညျပုံစံနဲ့ဆိုတော့ အားပေးခငျြစရာမဖွဈခဲ့ဘူး။
နောကျပိုငျး တငျးနဈမယျတှကေလညျး ပွိုငျပှဲတဈခုမှာ အောငျမွငျပွီးရငျ မကွာခငျမှာပဲ မွငျကှငျးထဲကပြောကျပြောကျသှားလရှေိ့လို့ ရှာရာပိုဗာတို့လို ပုရိသတှကေ နှဈအကွာကွီး ဝနျးရံခံရတဲ့ တငျးနဈမယျသိပျမရှိခဲ့ဘူး။
ဒါပမေဲ့ ဒီနှဈ US အိုးပငျးပွိုငျပှဲမှာ ဘယျသူမှမထငျမှတျထားလောကျအောငျ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့တဲ့ အသကျ(၁၈)နှဈအရှယျ ဗွိတိနျဆယျကြျောသကျလှပြိုဖွူလေး အမျမာရာဒူကာနူဆိုတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျပျေါထှကျလာခဲ့ပွီ။
ရာဒူကာနူဟာ US အိုးပငျးဗိုလျလုပှဲမှာ ကနဒေါတငျးနဈမယျ လိုငျလာဖာနနျဒကျဇျကို ၆-၄၊ ၆-၃ နဲ့ နှဈပှဲပွတျအနိုငျရခဲ့တာကွောငျ့ ၁၉၇၇ ဝငျဘယျလျဒနျပွိုငျပှဲမှာ ဗာဂြီးနီးယားဝိတျဒျ ဗိုလျစှဲခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး
ဂရငျးစလငျးခနျြပီယံဆုရရှိခဲ့တဲ့ ဗွိတိနျတငျးနဈမယျ၊ US အိုးပငျးပွိုငျပှဲမှာ (၅၃)နှဈအကွာမှ ခနျြပီယံဆုပထမဆုံးရရှိခဲ့သူ ဗွိတိနျတငျးနဈမယျစတဲ့ စံခြိနျကောငျးတှလေညျး ပိုငျဆိုငျခဲ့တယျ။
ရာဒူကာနူရဲ့မကျြနှာပုံစံက Sexy ကတြဲ့ပုံမဟုတျဘဲ Innocent ဖွဈတဲ့ရုပျမြိုးဖွဈပွီး အခုမှ (၁၈)နှဈဆိုတော့ ငယျဂုဏျလေးကလညျး ရှိနပွေနျတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အိုကွီးအိုမတငျးနဈမယျတှေ၊ အရှယျတငျရုပျကဖြွဈနတေဲ့ တငျးနဈမယျတှကွေားမှာတော့ ရာဒူကာနူက ပုရိသတှအေတှကျ ဝနျးရံခငျြစရာကောငျးနတေယျ။
အဲဒါကွောငျ့ ရှာရာပိုဗာခတျေလှနျမှာ ပုရိသတှရေဲ့အသညျးနှလုံးကို သိမျးပိုကျနိုငျမယျ့သူက ရာဒူကာနူမြားဖွဈလာမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား..ပရိသတျကွီးရေ . . .
ရှာရာပိုဗာခေတ်လွန်မှာ ပုရိသတွေရဲ့အသည်းနှလုံးကို သိမ်းပိုက်မယ့် US အိုးပင်းချန်ပီယံ ဗြိတိန်ဆယ်ကျော်သက်လှပျိုဖြူလေး
တစ်ချိန်တုန်းက ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ တင်းနစ်အကျော်အမော်တွေဖြစ်တဲ့ ကော်နီကိုဗာ၊ မာရီယာရှာရာပိုဗာတို့ဟာ တင်းနစ်ကွင်းထဲမှာသာမကဘဲ သူတို့ရဲ့အလှအပတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကော်နီကိုဗာဆိုရင် ဂရင်းစလင်းတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဘာမှမယ်မယ်ရရ အောင်မြင်မှုမရခဲ့တာတောင် သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေက ကော်နီကိုဗာမှ ကော်နီကိုဗာဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကော်နီကိုဗာနောက်ပိုင်း ပုရိသတွေရဲ့အာရုံက ရုရှားတင်းနင်လှပျိုဖြူလေး မာရီယာရှာရာပိုဗာဆီ ကျရောက်လာတော့တာပဲ။
ရှာရာပိုဗာရဲ့ ကွင်းတွင်းအောင်မြင်မှုက ကော်နီကိုဗာထက် အများကြီးသာခဲ့ပြီး သြစတြေးလျအိုးပင်း၊ ပြင်သစ်အိုးပင်း(၂၀၁၂၊ ၂၀၁၄)၊ ဝင်ဘယ်လ်ဒန်၊ US အိုးပင်းတွေမှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သလို ကွင်းပြင်ပမှာလည်း ရှာရာပိုဗာကို ‘ကြွေ’တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မနှစ်က၊ ဖေဖော်ဝါရီမှာ တင်းနစ်လောက,ကနေ ရှာရာပိုဗာအနားယူသွားတဲ့နောက် ပုရိသတွေ ဝန်းရံရမယ့် အချောအလှလေးတွေ သိပ်မရှိတော့ဘဲ အသက်ကြီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆရီနာဝီလျံစ်က နဂိုကတည်းက ယောက်ျားတစ်ယောက်လို ဒေါင်းတည်မောင်းတည်ပုံစံနဲ့ဆိုတော့ အားပေးချင်စရာမဖြစ်ခဲ့ဘူး။နောက်ပိုင်း တင်းနစ်မယ်တွေကလည်း ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ အောင်မြင်ပြီးရင် မကြာခင်မှာပဲ မြင်ကွင်းထဲကပျောက်ပျောက်သွားလေ့ရှိလို့ ရှာရာပိုဗာတို့လို ပုရိသတွေက နှစ်အကြာကြီး ဝန်းရံခံရတဲ့ တင်းနစ်မယ်သိပ်မရှိခဲ့ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ် US အိုးပင်းပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ် ဗြိတိန်ဆယ်ကျော်သက်လှပျိုဖြူလေး အမ်မာရာဒူကာနူဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီ။ ရာဒူကာနူဟာ US အိုးပင်းဗိုလ်လုပွဲမှာ ကနေဒါတင်းနစ်မယ် လိုင်လာဖာနန်ဒက်ဇ်ကို ၆-၄၊ ၆-၃ နဲ့ နှစ်ပွဲပြတ်အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် ၁၉၇၇ ဝင်ဘယ်လ်ဒန်ပြိုင်ပွဲမှာ ဗာဂျီးနီးယားဝိတ်ဒ် ဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဂရင်းစလင်းချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်တင်းနစ်မယ်၊ US အိုးပင်းပြိုင်ပွဲမှာ (၅၃)နှစ်အကြာမှ ချန်ပီယံဆုပထမဆုံးရရှိခဲ့သူ ဗြိတိန်တင်းနစ်မယ်စတဲ့ စံချိန်ကောင်းတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။
ရာဒူကာနူရဲ့မျက်နှာပုံစံက Sexy ကျတဲ့ပုံမဟုတ်ဘဲ Innocent ဖြစ်တဲ့ရုပ်မျိုးဖြစ်ပြီး အခုမှ (၁၈)နှစ်ဆိုတော့ ငယ်ဂုဏ်လေးကလည်း ရှိနေပြန်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိုကြီးအိုမတင်းနစ်မယ်တွေ၊ အရွယ်တင်ရုပ်ကျဖြစ်နေတဲ့ တင်းနစ်မယ်တွေကြားမှာတော့ ရာဒူကာနူက ပုရိသတွေအတွက် ဝန်းရံချင်စရာကောင်းနေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရှာရာပိုဗာခေတ်လွန်မှာ ပုရိသတွေရဲ့အသည်းနှလုံးကို သိမ်းပိုက်နိုင်မယ့်သူက ရာဒူကာနူများဖြစ်လာမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား..ပရိသတ်ကြီးရေ . .